Dubai waa meesha ugu fiican ee laga shaqeeyo, sida loo helo shaqo
Waa maxay sababta Dubai ugu fiican tahay goobta shaqada?
Shaqaaleynta shaqooyinka 2018 Dubai City
Hadda waxaan shaqaaleysiineynaa Dubai iyo Abu Dhabi
Dubai waa meesha ugu fiican ee shaqada ah?
Dubai waa meesha ugu wanaagsan ee shaqadu ?. Maxay taasi u dhacday ?. Xaqiiqdii, Dubai waa mid ka mid meelaha ugu wanaagsan dhulka. Wax su’aal ah lama waydiin karo, ugaadhsade kasto oo raadiya in lagu meeleeyo Dubai. Hadana shaqada ugu sarreysa ee UAE waa waddo wanaagsan oo loogu talagalay mushaharka canshuur la’aanta ugu wanaagsan weligaa. Laakiin si shaqada looga helo Emirates. Waxaad u baahan tahay inaad haysato meel a Talo-bixinta shaqo-xirfadeedka Dubai ee shaqo raadinta iyo siyaabaha suuqa aad naftaada hagid dhamaystiran.
Dubia sidoo kale waa goob ganacsi oo aad u badan. Waxaa jira siyaasiyiin badan, Xubnaha qoyska boqortooyada, iyo milkiilayaasha ganacsiga. Meeshan la yaabka leh ayaa ugu wanaagsan uguna wanaagsan magaalo cosmopolitan u ah qurba-joogta caalamiga ah. Dhanka kale, Magaalada Dubai waxaa loo aqoonsaday inay tahay magaalada ugu soo jiidashada badan dadka shaqo doonka ah. Ujeedada nolosha adduunyada carabiga, meeshani waa midda ugu wanaagsan uguna shuruudaha nolol xirfadeed iyo mid gaar ah. Dhex-dhexaadinta ganacsiga Imaaraatka, waad awoodaa Shaqooyin cajiib ah ayaa soo bandhigaan qorayaasha.
Dubai waa meesha ugu fiican ee shaqada ee Emirates?
Sida a calaamad u ah fayaqabka iimaanka. Meeshani waxay noqotaa 5th ee magaalooyinka caanka ah ee adduunka. Muhiimad kale oo muhiim ah ayaa ah magaaladan si dhakhso leh u noqotay meesha ugu booqashada badan ee loogu talo galay inay fuliyaan hawl wadeenada ugu fiican. Si aad u dhigto hab kale halkii tagitaanka iyo helitaanka shaqo meelo badan oo adag sida Singapore, London, iyo Paris. Xitaa meelaha sare ee lagu qiimeeyo dalxiiska oo ay weheliso New York, Hong Kong, Doha, Mumbai.
2018 Dliiska darajada waa mid aan laga adkaan karin gudaha kobaca dhaqaalaha iyo hal-abuurka ganacsi. Sidoo kale si siman waa muhiim guud ahaan soo jiidashada dadka caalamiga ah. Isla tusaalahan, tan Magaalada waa meel riyo ah oo ku saabsan xirfad cusub tayada iyo shuruudaha nolosha iyo kharashka nolosha. Shaqada UAE. Shirkadeena a mashiinka shaqo raadinta ee Dubai iyo shabakada qorista ee degaanka. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad codsato CV-gaaga.
Maxay Dubai tahay meesha ugu fiican ee looga shaqeeyo shaqada maareeye ahaan. Sababta oo ah shaqo dhakhso ayaad ku heli kartaa!.
Magaalooyinka Imaaraadka Carabta
Ugu horreyn, magaalooyinka ugu caansan magaalooyinka UAE waa kuwa ugu fiican Qalinjabiyeyaal iyo qurba-joogta cusub ee 2018. Dabcan, Abu Dhabi waa meel aad u fiican oo ku saabsan mihnadda maamulka, Dubai, iyo Sharjah waxay kaloo noqoneysaa magaalooyinka ugu qiimaha badan ee lagu noolaado World Business World.
2018 iyo 2019 ee sahanka ugu dambeeyay ee loogu talagalay oo martigelinaya Dubai oo ah meesha ugu fiican ee maamulayaasha. Xaaladahaasna marka aad raadineyso fursad shaqo oo wanaagsan xagga maareynta. Waa in aad u tixgeliyaan magaaladan inay tahay tan ugu wanaagsan adduunka. Madaxweynayaasha ku-xigeennada iyo Saraakiisha Sare ee Chef oo hela xitaa shaqooyin wanaagsan. Marka ay taasi jirto fursado shaqo oo ka wanaagsan heerka maamulka sare, ayaa fuliyayasha heer-ku-saleysan helaan nolol tayo sare leh oo guud oo nolosha ah iyo mushaharka aad ufiican iyo tartamada tartama marka la barbar dhigo kuwa kale.
Muddo sanado ah, shaqo raadis weyn oo raadinaya shaqooyin gudaha ah saliida iyo gaaska. The shaqaale xirfadlayaal ah oo imanaya Dubai sida goobta shaqada ugu fiican ee dunida. Si ay shaqo uga helaan Abu Dhabi ama Dubai waa dhabta ugu fiican ee mustaqbalka xirfadda.
Dhinaca kale ku dhowaad shaqaale doon ah oo ka yimid Hindiya Maalin kasta fiirinta fursadaha shaqooyinka saliidda iyo gaasta ee 8,000. Dhamaan shaqaalaha xirfadlayaasha ee Dubai waxay u baahan yihiin inay ka jawaabaan wakiil kasta oo shaqaale qorista. Iyadoo tan maskaxda ku haysa had iyo jeer fiirso goobta shaqada ee cusub ee internetka si loo baro macluumaadka shaqooyinka ku saabsan xirfadda. Qodobka ugu wanaagsan ee qoritaanka ayaa ku qoraya wakiilo ka shaqeeya Dubai oo ku yaal liiska liiska shaqooyinka.
Soojiidashada Dalxiiska ee Dubai
Magaalada ugu fiican meeraha wuxuu noqday Dubai ee Imaaraadka Carabta. Meesha ugu wanaagsan ee booqdayaasha fasaxa iyo meel kulul oo loogu talagalay shaqooyinka. Waxaa jira meelo badan oo magaalada ah. Xaqiiq ahaan, martida cusub waxay jecel yihiin meeshan sababtoo ah sare u kaca iyo suuqyada dukaamaysiga. Laakiin si aad shaqo uga hesho Dubai waxaad u baahan tahay inaad haysato fiiso shaqeyneysa. Dhinaca taban, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida shaqo loo helo.
The Hogaamiyaha Dubai wuxuu gobolka oo dhan ka beddelay Dowladda yar-yar oo u noqotay shirkad weyn. Dubai ayaa dhaqaaqday meel cidla ah ilaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican meeraha. Inta badan soo jiidashada iyo meeshuu u dhoco si ka sii badan booqdayaasha UAE. Ma aha oo kaliya inaad ku raaxaysatid badweynta laakiin waxaad raadin kartaa gorgortanada iibka.
Dhamaan agagaarka Emirates, waa qurux badan. Isla mar ahaantaana, UAE ayaa ah meesha ugu fiican ee qoysaska madadaalo leh. Caasimadda UAE waa goob caan ah oo loogu talagalay dadka ajnebiga ah. Dadku waxay jecel yihiin meeshan sida Burj Khalifa. Tani waxay si rasmi ah u dhiseysaa dhismaha ugu dheer dunida ee GCC. Laakiin xitaa in ka badan, meelaha ayaa muhiim u ah qoyskaaga. Tusaale ahaan sumcad ganacsi oo Dubai ah.
Magaaladayaga qurxoon ee Dubai ayaa had iyo jeer u buuxisa qof kasta. Waxaad ka dooran kartaa dhowr jiidasho ka aquariums mammoth iyo sbooloyinka barafka ee gudaha. Si loo dhigo hab kale, magaaladan waxay leedahay muuqaallo dhaqameed badan dadka soo booqda iyo kuwa udgooneyaashaba. Waxaa jira waxyaabo badan oo badan oo laga sameeyo dhamaan daafaha Emirates. Gawaarida meeshan ayaa ah kuwa ugu caansan oo leh casriga casriga ah.
Dubai waa meesha ugu fiican ee shaqada, isku day inaad shaqo hesho sida Expat.
Sidoo kale dowladda Emirates ayaa sidoo kale waxay taageertaa dibad-baxayaasha Dubai ee ku soo baxa xirfado. Dhamaan dadka ku nool magaalada Emirates waxay jeclaan lahaayeen inay ku kasbadaan ayna ku qaataan lacagtooda shidaalka gudaha Dubai iyo Abu Dhabi. Guud ahaan maamulka sare ee caalamiga ah ayaa mar walba ku soo dhaweeya garoonka Emirates. Shirkado farabadan oo kaashanaya Dubai oo la leh Singapore, New York, iyo shirkadaha raasamaalka ee Human Resources.
Shirkadaha shaqaalaysiinta hogaaminta sida Adecco, Bayt iyo GulfTalent iyo kuwa kaloo badan. Waxay UAE ka hormarineysaa dalal kale ujeeddo shaqaaleysiin. The Shaqooyinka ugu fiican waxay ku jiraan qaybaha saliidda ku salaysan. Sababtaas darted dhaqaalaha dalalka Khaliijka iyo Bariga Dhexe sida gobolkaXXUMX ee soo jiidashada maamulayaasha cusub. Tikidhada ugu wanaagsani waxay markasta raadinayaan shirkadaha UAE. Halkaas ayaad ka heli kartaa helitaanka fursado shaqo caalami ahaan sida dumar ah.
Guud ahaan marka laga hadlayo dadka shaqo doonka ah qaarkood waxaa laga yaabaa inay la yaabto. Taasi kaliya maaha Magaalada Dubai waxaa loo aqoonsaday inay tahay meesha ugu wanaagsan ee laga shaqeeyo UAE. Expats sidoo kale waxay si fiican u qiimeeyaan Shariah iyo Abu Dhabi. Shaqo raadin caalami ah ayaa waliba la heli karaa markaad adiga tahay shirkadaha Emirates iyo Saudi Arabia.
Muddada dheer, hoggaamiyeyaasha ganacsiga Dubai iyo go'aamo muhiim ah ayaa ah dadka ugu muhiimsan maaraynta kheyraadka dadka. Shaqada ugu badan, dadka doonka ah waxay aqoonsadaan dhaqdhaqaaqa dalkan. Wakiillada shaqaalaynta ayaa hoggaamiya dad badan oo u kala socda Dubai iyo Abu Dhabi sida meel ay ku noolaadaan, u shaqeeyaan oo si firfircoon ugu raaxaystaan ​​noloshooda ku nool adduunka ganacsiga Carabta.
Waa maxay sababta Dubai ugu fiican tahay goobta shaqada? Sababtoo ah inta badan kharashku waxay halkaas ka helaan shaqo.
Talo siinta shaqo ku hesho UAE
Marka loo eego duruufahaas shaqaale raadinaya Halkii laga heli lahaa goobaha shaqo ee caadiga ah. Hadda waxaad dooran kartaa bogagga internetka ee mushahar bixinta. Sababtoo ah haddii qof shaqeynayo Dubai in ka badan sanado 10. Waxay leedahay fursado dheeraad ah si aad shaqo uga hesho suuqa shaqada ee xaafadda Emirates. Ma aha wax la yaab leh in ay hubaal in aad shaqo ku hesho Imaaraadka Carabta ee Pakistan. Xitaa shaqooyinka bannaan sida CEO iyo Agaasimaha Maamulka (MG). Ama koox MBC ah iyo Madaxa Ururka Isbahaysiga Dibadda ee Imaaraadka.
Shaqada ugu badnaan, shaqaaleeyayaashu waxay abuureen tiro badan oo shaqaale tayo leh. Iyo waxay u yimaadeen inay ka shaqeeyaan UAE sanad walba. Isla mar ahaantaana, shaqaale xirfadlayaal ah oo ka socda India ayaa ah joogitaanka waqtiyo badan oo ku yaala Emirates. Farxadda suuq injineerku casuumo dad badan sannad kasta. Magaalada Dubai waxay ka dhigaysaa dhamaan shaqooyinka banaan ee maamulayaasha caalamiga ah. Magaaladan layaabka leh ee Carbeed waxay sameyneysaa isku dhaf khasab ah shaqo cajiib ah iyo qaab nololeed isu dheelitiran dad badan.
Imaaraadyada, guud ahaan marka laga hadlayo, waxaa jira kuwa badan fursadaha soo jiidasho leh ee 2020. Shaqooyinka Dubai waxay noqdeen kuwa aad loo jecel yahay iyo in xirfado lagu dhiso shirkado badan oo Resume ah. Waxaad u baahan tahay inaad haysato ku bilaabay khibrad tayo sare leh gudaha UAE. Shirkadaha ugu fiican halkan Dubai waa shirkadaha caalamiga ah. Meeshaad awoodid Dhisidda khibrad dheer oo ku saabsan Bariga Dhexe.
Yousuf Almulla Madaxa Suuqa Istaraatiijiyadda ee Dubai Holding, Qofka ugu weyn ee Ganacsiga Dubai kaasoo ah UAE dhalasho ahaan iyo EMBA alumnus. Isagoo had iyo jeer ka hadlaya wareysigooda ku saabsan natiijooyinka Imaraatka UAE. Xirfadda UAE waa mid aad uwanaagsan ee maamulayaasha iyo hogaamiyaasha fulinta. UAE waa waddamada loogu tala galay shaqo doonka qaranka iyo ugaarsiga shaqo ee qurbaha. Bulshooyinka had iyo jeer u kacaya si loo helo aqoonsi noocaas ah.
Shaqooyinka magaalada Dubai ma fududa in la helo
Sida xaqiiqda dhabta ah, Shirkadda Dubai City waxay go'aansatey inay qado adeegyo gaar ah. Dhanka kale, waxaan nahay caawinta dadka doonaya xirfadlayaasha ee dalalka Gacanka sida Qadar iyo Sacuudiga. Tan iyo 2009 waxaan maareyneynaa codsiyada shaqo doonka ah. In rajada in qurbaha shaqo doonka ah waxay shaqo cusub ka heli doonaan Qatar ama Saudi Arabia.
Dhinaca kale, shirkadda Dubai City waxay noqoneysaa mid deg deg ah goobta shaqo ee ugu fiican Bixiyaha adeega ee No.1 ee UAE. Sidaas darteed qof kasta oo shaqo doonka ah wuxuu CV u diri karaa Shaqooyinka Dubai. Shaqada guud ee Bariga Dhexe way adag tahay in la helo. Iyo in qof kasta ogyahay. Laakiin qorsheheena maareynta warbaahinta bulshada, way fududahay in la helo. Marka adiga bilaabi naftaada suuqa shaqada ee UAE waxaad si fudud u heli kartaa shaqo ku yaal Dubai City.
Isla mar ahaantaana, dad badan dadka shaqo doonka ah waxay u gudbin karaan bogga internetka ee khibradda MBA. Arintaasna, waxay shaqo ka heshay Dubai. Waa muhiim in la garto haddii aad raadineyso inaad shaqo ka hesho UAE. Adeegso adeegyadeena oo hel shaqo helitaan dhakhso leh fadlan Adeegso qaybta Resume Resume qaybta. Dhinaca wanaagsan haddii aad raadinayso xirfad maamul. Waxaan bixinaynaa Adeegyada raadinta shaqo ee ugu fiican ee UAE. Waa in aad wakiilkaaga u dirtaa shirkadda Dubai City si aad ugu gudbiso manhajka manhajka.
maxaad Dubai waa meesha ugu fiican ee lagu shaqeeyo iyo kharashyada cusub?. Sababtoo ah dadka maareeya shaqooyinka UAE.
Resume Resume ee Shaqooyinka Dubai
Shirkadda Dubai City waxay caawineysaa dadka shaqo doonka ah kaliya maahan UAE. Waxaan sidoo kale gacan ka geysaneynaa sidii aan shaqo uga heli lahayn Qatar, Saudi Arabia, iyo Masar. Dhanka kale, waxaan nahay mid ka mid goobaha ugu shaqada wanaagsan Bariga Dhexe. Iyada oo tan maskaxda lagu hayo, ayaa shaqo doon dooneha si toos ah ugu xareyn kara shirkadda Dubai City Company. Ururkeena maaraynta shaqooyinka gudaha guriga. Qof kasta oo shaqo doon ah wuxuu soo gudbin karaa Manhajka Manhajka. Gaar ahaan wakaaladaha shaqaalaynta ee Hindida. Iyo shirkadaheenna barnaamijka shaqo raadiyaha ee Dubai iyo Abu Dhabi. Si kalsooni leh ayuu kuu shaqeyn doonaa.
Dhamaan shaqa kasta oo doonaya inuu ka yimaado Hindiya iyo Pakistan oo soo gudbinayaan Resume. Waxaa jiri doona fursado yar oo lagu dooran karo. Dhibaatooyinka suuqa shaqada ee caalamiga ah way soo gudbin karaan manhajkooda Vitae. Habka ugu wanaagsan ayaa ah gelinta CV wakiilada shaqaaleynta iyo shirkadaha HR. Habka caqliga lihi sidoo kale waa in la helo ikhtiyaar u xareynta lacagta qaddarka oo aad shaqo ka hesho UAE. Adiguna, adiga oo ah ugaare xirfad shaqo iyo baadiye waa hab aad u wanaagsan cilmi baarista qaab nololeedka cusub.
Xaaladahaas oo kale, caddaynta oo ay bixiso shirkadda Dubai City. Shaqo kasta oo shaqo doonka ah wuxuu awoodaa inuu helo shaqo si fiican u shaqeeya oo ku shaqeeya Abu Dhabi. Sababtan darteed, xirfadlayaashu guud ahaan waxay ku hadlaan iyagoo awood u leh inay shaqo helaan iyagoo isticmaalaya shirkadda Dubai City.
Maxaa Dubai ugu fiican meesha shaqada iyo meheraddaada?. Kuwa fuliya maaraynta shaqo bixinta sare ee UAE.
Shaqaalaha Indian iyo Pakistani ah
Ururkayagu wuxuu caawimaad u fidiyaa dadka shaqo doonka ah inta badan Hindiya iyo Pakistan. Qof kasta oo cusub oo diiwaangeliya arjiga shaqada. Dhab ahaan, hel a qalab shaqo raadinta. Marka sidaas, waxay awood u yeelan doonaan inay ku xiriiraan hay'adaha shaqaalaynta, madax-ilaaliyayaasha, agaasimayaasha maaraynta ee Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, iyo Masar. Sidoo kale U fiirso hagaha dalxiiska ee Imaaraadka Carabta.
Shirkadda Dubai City waa hay'adda ugu fiican ee qorista ee Imaaraadka Carabta. Si kale loo dhigo, waxaan nahay ka caawinta tarjumaad kasta oo shaqaale ah iyo ugaadhsiga shaqada iyada oo la dhigayo UAE. Iyadoo dareenka dadka caalamiga ah ee jeclaan lahaa u soo gudbi xirfad bangi. Waa maxay sababta Dubai ay tahay meesha ugu wanaagsan ee loo shaqeeyo sidii Hindiya iyo Pakistani? Dadka qaata fiisada shaqo ee kuyaal UAE. Si dhakhso ah.
Dhanka kale, waxaad ku dareemi doontaa keyd Dubai. Booliisku waa wax la yaab leh Dubai iyo Abu Dhabi.
Sidaas darteed haddii aad shaqo raadinayso Dubai
Dubai waa meesha ugu fiican ee loogu talagalay shaqada sida dalxiis? Shaqaale doonaya inay shaqo helaan oo ka shaqeeyaan UAE.
Hadda waxaad haysataa dhammaan macluumaad ku saabsan nolosha UAE. Waa inaad xaqiiqdii isku daydaa adeega raadinta shaqada ee hoteelka. Shirkadeena Dubai waa urur aad u fiican oo daacad ah. Waxaan ka caawineynaa sidii aan uga heli laheyn shirkadda Dubai oo aan shaqo ku helno gudaha Imaaraadka Carabta.
Taasi micnaheedu waa, waxaan ka mid nahay bixiyaha macluumaadka ugu wanaagsan ee qaab nololeedka Dubai ee 2019 waxaanan rajaynayaa shirkadda ugu fiican mustaqbalka 2020. Kooxdayada ayaa baaraysa wararkii ugu dambeeyay ee shaqooyinka waxayna ku dhajinayaan Blog-ga Dubai. Qodob kale oo muhiim ah haddii aad raadineyso shaqada oo aad kujirto waa inaad sameysaa wareejinta resunta shirkadaha sare oo ka soo jeeda Dubai City.
Shirkadda Dubai City waa shirkada ugu fiican ee maareynta raadinta xirfadaha. Sidaas darteed haddii aad khibrad u leedahay ganacsiga sida C-Level waxaan awoodnaa waxay ku siinaysaa fursado shaqo oo aad u fiican Dubai. Mashruuceena shaqo ee maareynta shaqooyinka raadinaya maamulayaasha maamulka gudaha iyo dibedda Dubai ee maamulayaasha sare.
Qof kasta oo shaqo doon ah waa inuu tixgelin Dubai Dubai shaqo cusub. Emirates waa goobta ugu fiican ee loogu tala galay dadka ajnabiga ah ee u shaqeeya IT iyo Google. Dubai waa goobta ugu fiican ee shaqada CV-gaaga shirkadeena.
Dubai waa meesha ugu fiican ee loogu talogalay shaqada sida dalxiis
Shaqo ka raadso magaalada Dubai!
Shaqaaleynta shaqooyinka UAE
Soo hel a Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Dubai? si la yaab leh ayaad u heli kartaa. Si fudud u bilaabi a cusub meheradda Dubai!
Resume Resume oo ah magaalada ugu sarreysa ee aduunka! - Dubai City.